Shiinaha soosaarayaasha mesh Wireless Wireless & Da Shang
Marka aagga furani yahay mid muhiim ah, isgoysyada dheeraadka ah ee u dhexeeya isgoysyadu waxay bixiyaan tolmo aad u adag waxayna siiyaan quful iyo cidhiidhi fiilooyinka iftiinka ah ee la xidhiidha furitaannada waaweyn.
Sababtoo ah geedi -socodsiinta, meshku wuxuu leeyahay furitaan aad u sax ah oo joogto ah waxaana la tolaa ka dib marka la xoqo. Waxaa caadiyan la doorbidayaa shaashadaha gariirka iyo codsiyo kale oo badan oo cabbirkoodu muhiim yahay. Waxaa loo isticmaali karaa daaqadaha, xijaabyada, dubista hilibka iyo shaandhaynta bur ama shaashadaha miinada.
Habka loo tolo:
*Caado Laba Jibbaaran-Nooca ugu badan. Waxaa loo adeegsaday halka furitaanku aad u yar yahay marka la barbar dhigo dhexroorka siligga.
*Furaha qufulan-Waxaa loo adeegsadaa sifo qafiif ah oo keliya si loo ilaaliyo saxsanaanta dharka inta lagu jiro nolosha shaashadda, halkaas oo furitaanku ku weyn yahay marka loo eego dhexroorka siligga.;
*Dillaac-dusha sare leh-Sida caadiga ah wuxuu ka bilaabmaa 5/8 ″ (15.875 mm) furitaankiisa iyo ka weyn. Waxay bixisaa nolol adkaysi dheer leh, maadaama aysan jirin wax saadaalin ah oo korka lagu xidho. Waxay bixisaa ugu yaraan iska caabin socodka. Waxa kale oo aad loogu jecel yahay qaar ka mid ah codsiyada qaabdhismeedka iyo qaabdhismeedyada halkaas oo dusha siman oo dhinac ah la jecel yahay.
*Inter Crimp-Waxaa loo adeegsaday tolmo adag oo silig-khafiif ah si ay u siiso xasillooni weyn, cidhiidhiga dhogorta iyo adkaynta ugu badan. Aad ugu badan furitaanka mesh ka weyn 1/2 ″ (12.7 mm).
Alaabta mesh silig ee waajibka ah ayaa inta badan loo adeegsadaa shaashadda macdanta, warshadda dhuxusha, dhismaha ama warshadaha kale.
Nooca fudud ee mesh silig jilicsan ayaa loo isticmaali karaa in lagu dubto, qaabku wuxuu noqon karaa wareeg, afargees, qalooc iyo wixii la mid ah. Waxaa loo isticmaalaa in lagu dubo cuntada ama hilibka, iyo kulaylka iska caabinta, iska caabinta daxalka, aan sun ahayn, dhadhan lahayn oo ku habboon maaraynta.
Astaamaha Silbiska Siligga ee Dillaacsan
-Qaab dhismeed adag
-Iska -caabinta sare
-In si fudud loo rakibo
-In si fudud loo gooyo si loo habeeyo
Qalabka loogu talagalay mesh silig ah
-Qalabka birta ah
-Baarboon Kaarboon sare
-Bal bir ah
-Bir daxal laheyn
Xiga: Ahama Steel Alxanka Wire mesh